Excel Development Bank Limited(Excel Development Bank Limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर सेयरधनीहरुको डिम्याटमा
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको १२ प्रतिशत बोनस सेयर सेयरधनीहरुको डिम्याट खातामा जम्मा गरिएको छ। बैंकको सेयर रजिस्ट्रार एनआइबिएल एस क्यापिटलले आज एक सूचना जारी गर्दै एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयर सेयरधनीहरुको डिम्याट खातामा जम्मा गरिदिएको जानकारी गराएको हो। उक्त बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र...
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंककोे नयाँ ट्रिपल धमाका र १ को ५ धमाका निक्षेप मुद्दति योजना सार्वजनिक
काठमाण्डौ। एक्सेल डेभलपमेन्ट वैंक लिमिटेडले नयाँ मुद्दति योजना ‘एक्सेल सुपर मुद्दति’ अन्तर्गत ट्रिपल धमाका र १ को ५ धमाका मुद्दति खाता सार्वजनिक गरेको छ। ट्रिपल धमाका मुद्दति योजनाअन्तर्गत ग्राहकले १० वर्षमा अहिले जम्मा गरेको रकमको ३ गुना रकम पाउनेछन्। आजको बचतले भविष्यमा पर्न सक्ने आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्न यस योजनाले सहयोग...
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयर सेयरधनीहरुको डिम्याट खातामा
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले हकप्रद सेयर सेयरधनीहरुको डिम्याट खातामा जम्मा गरिदिएको छ। बैंकले गत भदौ ३१ गतेसम्म सेयर अभौतिकीकरण गराएका सेयरधनीहरुको खातामा हकप्रद सेयर डिम्याट खातामा जम्मा गरिदिएको हो। उक्त मितिपछि सेयर अभौतिकीकरण गराएका सेयरधनीहरुको हकमा सेयरधनीहरुको सम्बन्धित डिम्याट खातामा जम्मा हुने व्यवस्था...
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको लिलामी सेयरमा आवेदन खुला
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले अवितरित हकप्रद सेयर आज मंसिर २९ गतेबाट लिलामीमा राखेको छ। बैंकले गत असोज २५ गतेदेखि कात्तिक २९ गतेसम्म निष्कासन गरेको हकप्रदमा बिक्री हुन नसकेको सर्वसाधारण समूहतर्फको २७ हजार २५७.२००४ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो। लिलामीमा राखिएको सेयरको न्यूनतम मूल्य १०० रुपैयाँ तोकिएको छ। यसको अर्थ न्यूनतम...
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले अवितरित हकप्रद सेयर यही मंसिर २९ गतेबाट लिलामीमार्फत बेच्ने भएको छ। बैंकले गत असोज २५ गतेदेखि कात्तिक २९ गतेसम्म निष्कासन गरेको हकप्रदमा बिक्री हुन नसकेको सर्वसाधारण समूहतर्फको २७ हजार २५७.२००४ कित्ता सेयर लिलामीमार्फत बिक्री गर्न लागेको हो। लिलामीमा राखिने सेयरको न्यूनतम मूल्य १००...
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको २७ हजार कित्ता बढी अवितरित हकप्रद सेयर लिलामीमा आउने भएको छ। बैंकले असोज २५ गतेदेखि कात्तिक २९ गतेसम्म १०ः३ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गरेको छ। बैंकले १०० अंकित दरका कुल २४ लाख ३३ हजार २६२.६७ कित्ता हकप्रद जारी गरेको थियो। बैंकको यो हकप्रदमा ६ हजार १८० आवेदकबाट कुल २४ लाख ६ हजार १०६.४७३८ मात्र...
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद भर्ने आज अन्तिम दिन, अहिलेसम्म कति परेको छ आवेदन ?
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रदमा आवेदन दिने आज कात्तिक २९ गते अन्तिम दिन रहेको छ। एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले बैंकले गत असोज २५ गतेबाट आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ। बैंकले चुक्तापुँजी ८१ करोड ११ लाख २१ हजार २२४.७२ रुपैयाँको १०ः३ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो। जसअनुसार बैंकले...
अहिलेसम्म एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रदमा कति पर्यो आवेदन ?
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सोमबार बिहानसम्म झन्डै २० प्रतिशतमात्रै बिक्री भएको छ। एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले बैंकले गत असोज २५ गतेबाट आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ। बैंकले चुक्तापुँजी ८१ करोड ११ लाख २१ हजार २२४.७२ रुपैयाँको १०ः३ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो। जसअनुसार...
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद भर्ने म्याद थप, अब कहिलेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ ?
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने म्याद दुई साता थप गरिएको छ। बैंकको हकप्रदमा अब कात्तिक २९ गते बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलले जनाएको छ। यसअघि यो बैंक हकप्रदमा आज कात्तिक १४ गते बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने भनिएको थियो। एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले...
अहिलेसम्म कतिले भरे एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद ?
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयरमा आज शुक्रबार दिउँसो साढे १५ प्रतिशतमात्रै सब्सक्राइब्ड भएको छ। यो बैंकले गत असोज २५ गतेबाट आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ। बैंकले चुक्तापुँजी ८१ करोड ११ लाख २१ हजार २२४.७२ रुपैयाँको १०ः३ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो। जसअनुसार बैंकले १००...
अहिलेसम्म कति पर्यो एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रदमा आवेदन ? कहिलेसम्म छ भर्ने म्याद ?
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयरमा आज सोमबार बिहान झन्डै ५ हजारले मात्रै आवेदन दिएका छन्। यो बैंकले गत असोज २५ गतेबाट आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ। बैंकले चुक्तापुँजी ८१ करोड ११ लाख २१ हजार २२४.७२ रुपैयाँको १०ः३ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो। जसअनुसार बैंकले १०० अंकित दरका...
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रदमा आवेदन खुला, कहिलेसम्म कायम सेयरधनीले भर्न पाउँछन् ?
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले आज असोज २५ गतेबाट आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ। बैंकले चुक्तापुँजी ८१ करोड ११ लाख २१ हजार २२४.७२ रुपैयाँको १०ः३ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो। जसअनुसार बैंकले १०० अंकित दरका कुल २४ लाख ३३ हजार ३६३.६७४२ कित्ता हकप्रद जारी गरेको छ। नेपाल धितोपत्र...
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमा ३ सञ्चालक निर्वाचित
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमा सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट ३ जना सञ्चालक निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। बैंकको हिजो शनिबार सम्पन्न १५ औँ वार्षिक साधारणसभाबाट सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट ३ जना सञ्चालक निर्विरोध निर्वाचित भएका हुुन्। निर्वाचित हुने सञ्चालकमा पर्शुराम दाहाल, पुरुषोत्तम लम्साल र पेसलराज पोखरेल छन्। सोही...
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ३०% हकप्रद असोज २५ बाट निष्कासन हुने
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले यही असोज २५ गतेबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गर्ने भएको छ। बैंकले चुक्तापुँजी ८१ करोड ११ लाख २१ हजार २२४.७२ रुपैयाँको १०ः३ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको हो। जसअनुसार बैंकले १०० अंकित दरका कुल २४ लाख ३३ हजार ३६३.६७४२ कित्ता हकप्रद जारी गर्नेछ। नेपाल...